डिम्बाशयमा क्यान्सर किन हुन्छ? कुन उमेरका महिला बढी जोखिममा? (भिडियो) :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डिम्बाशयमा क्यान्सर किन हुन्छ? कुन उमेरका महिला बढी जोखिममा? (भिडियो)
रिता लम्साल मंगलबार, कात्तिक २, २०७८, ०६:४५:००
महिलाहरुमा हुने विभिन्न किसिमका क्यान्सर मध्ये डिम्बाशयको क्यान्सर पनि एक हो। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा सृष्टि श्रेष्ठ प्रजापतिका अनुसार डिम्बाशयको क्यान्सर हुनुको कारण यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था नभएपनि वंशागुणत कारण तथा महिलाहरुले ढिलो उमेरसम्म पनि बच्चा नजन्माउदा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। समयमै पत्ता लागेमा डिम्बाशयको क्यान्सर उपचार गरेर निको पार्न सकिने डा प्रजापतिले जानकारी दिइन्। उनी क्यान्सर छ वा छैन भनेर समयमै पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिन्छिन्। डा प्रजापतिसँग डिम्बाशयको क्यान्सरबारे स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः
डिम्बाशयको क्यान्सर भनेको के हो?
ओभरीको क्यान्सरलाई नेपालीमा डिम्बाशयको क्यान्सर भनिन्छ। महिलाको पाठेघरको दायाँ र बायाँ डिम्बबाहिनी नली हुन्छ। उक्त नलीपछि अण्डाशय वा डिम्बा रहेको हुन्छ। यसमा हुने क्यान्सरलाई नै डिम्बाशयको क्यान्सर भनिन्छ।
कुनैपनि क्यान्सर हुनु भनेको ‘एबनर्मल’ कोशिकाहरुको अनियन्त्रित वृद्धि हुनु हो। यसरी अनावश्यक कोशिकाहरु अत्याधिक मात्रामा वृद्धि हुँदा ट्युमर निस्किन्छ।
डिम्बाशयमा अनियन्त्रित कोशिकाहरु वृद्धि भयो भने त्यसलाई डिम्बाशयको क्यान्सर भनिन्छ।
डिम्बाशयमा क्यानसर किन हुन्छ? कुन उमेर समुहका महिलामा डिम्बाशयको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ?
डिम्बाशयमा क्यान्सर हुनुको कारक तत्व भने अहिलेसम्म यही नै हो भनेर एकिन गर्न सकिएको छैन। तर कुन उमेर समुहका महिलाहरुमा यो क्यान्सर हुने जोखिम रहन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो परिवारमा दिदी बहिनी वा आमा, आमाका दिदीबहिनीहरुमा क्यान्सर छ भने त्यो परिवारका अन्य महिलाहरुलाई पनि यो क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। जसलाई हामी वंशाणुगत कारण भन्ने गर्छौं। युवा अवस्थामै डिम्बाशयको क्यान्सर हुन्छ भने त्यो वंशाणुगत कारण हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
अर्को कुरा महिलाहरु महिनावारी हुने वा गर्भवती हुने गर्छन्। त्यो समयमा शरीरमा हर्मोनल ‘ग्याप’ हुन्छ। यो नहुँदा अर्थात महिलाहरुले ढिलो उमेरसम्म पनि बच्चा नजन्माउँदा पनि डिम्बाशयको क्यान्सर हुने जोखिम उच्च रहन्छ।
डिम्बाशयको क्यान्सर भएका बिरामी समयमै उपचारका लागि आइपुग्ने गरेका छन्?
नेपालको अवस्था र विश्वको अवस्था हेर्दा पनि डिम्बाशयको क्यान्सर भएका महिलाहरु उपचारमा ढिला आउने गरेको देखिन्छ।
यसको मुख्य कारणमा जस्तैः पाठेघर वा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो चरणमै लक्षणहरु देखिन्छ। तर डिम्बाशयको क्यान्सरमा सुरुवाती अवस्थामा लक्षण नदेखिन सक्छ। त्यसैले डिम्बाशयको क्यान्सरलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भन्ने गर्छौं।
यो लुकेर आउँछ। डिम्बाशयको क्यान्सर भएका महिलाहरु ग्याष्ट्राइटिसको जस्तो पेट फुल्ने, खाना नपच्ने, खान मन नलाग्ने, थोरै खाना खाँदा पनि पेट फुलेको जस्तो लक्षण देखिन्छ।
तर यस्तो लक्षण देखिँदा महिलाहरु खानपिनमा गडबड भयो वा ग्याष्ट्राइटिस भयो होला भन्ने सोचेर औषधि पसलबाट ग्याष्ट्राइटिसको औषधि खाएर बस्ने गरेको पनि देखिन्छ। लामो समयसम्म समस्या देखिएपछि २,३ महिनामा क्यान्सर परीक्षण गर्न आइपुग्दा उहाँहरुमा तेस्रो तथा चौँथो स्टेजको क्यान्सर भइसकेको भेटिने गरेको छ।
कुनैपनि क्यान्सर जति छिटो पत्ता लाग्यो त्यति नै निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तर जति ढिला उपचारमा आउनुहुन्छ त्यति नै पूर्ण निको हुने सम्भावना कम रहन्छ।
डिम्बाशयको क्यान्सर लाग्नै नदिन वा रोकथाम गर्न सकिन्छ?
डिम्बाशयको क्यान्सर लाग्नै नदिने उपाय छ भन्न सकिँदैन। तर, रोग समयमै पत्ता लगाउन भने सकिन्छ। रोग लागेर सिकिस्त नभएसम्म अस्पताल नजाने धेरैको बानी भएकाले पनि समस्या परेको हो। यदी यो बानी परिवर्तन गर्ने हो र कम्तिमा वर्षमा एकपटक मात्र भएपनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराएमा समयमै रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ।
हामीले भेट्ने गरेका छौं बिदेश जानका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा डिम्बाशयमा डल्लो देखिएर आएको भन्ने महिलाहरु। त्यसैले नियमित स्वास्थ्यजाँच, भिडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड गर्दा पनि डिम्बाशयमा क्यान्सर भएको भेटिन सक्छ।
यो प्रविधिलाई पनि विकास गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा डिम्बाशयको क्यान्सर वंशागुणत हुने भएकाले परिवारमा कसैलाई डिम्बासयको क्यान्सर छ भने उहाँहरुले ध्यान दिनुपर्छ। समयमै परीक्षण गराउनुपर्छ।